एभिन्युज टेलिभिजनचीन सरकारद्वारा नेपाललाई पचास अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग - एभिन्युज टेलिभिजन
1 Chaitra 2074 Thursday 4:42 pm 1 प्रतिकृया
काठमाडौं । चीन सरकारले तातोपानी नाका, सिन्धुपाल्चोक अस्पताल र जिरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागी तीन बिलियन चिनियाँ युआन अर्थात झण्डै पचास अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको छ ।
बिहिबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर गरे ।
चीनले तातोपानी नाका सूचारु गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन र निर्माणका लागी सहयोग गरेको जनाएको छ । प्राप्त सहयोग रकम ९ बेडसहितको सिन्धुपाल्चोक अस्पतालको पुननिर्माण, जिरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको पुनर्मिाण, लाईबे्ररी तथा ल्याव निर्माण र तातोपानी नाका सुधारका लागि खर्च गरिने छ ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विभिन्न पूर्वाधारको पुननिर्माणमा चीनको सहयोग निरन्तर रहने बताए । उनले क्रस बोर्डर गतिविधिलाई सहज र सरल बनाउने तयारी गरिएको जानकारी समेत दिए ।
अर्थसचिव अधिकारीले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनले पुयाउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । चिनियाँ सहयोगबाट तातोपानी नाकाको व्यापार सुचारु हुने र पुननिर्माणले गति लिने सचिव अधिकारीले बताए ।
Mani Lama says:
चीनकाे नेपाल प्रतिकाे सद्भाव र साझा स्वार्थमा
साझेदारी हाे वा सामरिक रणनीतिक साझेदारी हाे ? याे दुबै सरकारले स्पष्ट गर्ने कुराे हाे ।
मलाई लाग्छ , यति ठुलाे धनराशीकाे लाभ के नेपाली जनता , विशेषत: जाति , भाषा , धर्म , सँस्कृति , लिङ्ग र भूगाेलका ९० % प्रतिसत उत्पीडित , वहिष्कृत , विभेदमा पारिएका र राज्यकाे मुलधारबाट अलगथलग पारिएका वर्ग र समुदाय सम्म पुग्ला ? यसमा ध्यान पुगेकाे देखिएन ।
चीन स्वयमले आन्तरिक रूपमा भ्रष्टाचार विरूध्दकाे अभियान र सुशासनलाई चीनकाे विकास र अन्तराष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारीसंग जाेड्दै विशेष प्राथमिकता दिएकाे छ । तर , आफ्ना छिमेकी तथा सैन्य सामरिक महत्व राख्ने नेपालमा सँस्थागत गरिएकाे भ्रष्टाचार , एकल जातीय र एकात्मक शासनलाई न्युनिकरण गर्न कुनै चासाे र प्राथमिकता सम्झेकाे देखिएन । यस्ता राज्य व्यवस्थाबाट चीनकाे प्राथमिकताहरू र सुरक्षा चासाेहरू के सुरक्षित र संरक्षण हुन सक्ला त ?
किनभने , नेपालकाे राज्यसत्ताकाे चरित्र र स्वार्थ दलाल सँस्कृतिकाे रहेकाे मात्र छैन । अपितु , यी शासकीय जातिहरू चीनसंग भन्दा भारत मार्फत पश्चिमाहरू प्रति झुकाउ र भरपर्ने चारित्रीक परम्परा रहँदै आएकाे पाइन्छ । के चीनकाे नेपाल नीति र विश्वास यिनीहरूबाट पुरा हुने सम्भावना देख्नु जायज र सही हाेला ? भविष्यमा देखिएला ।
तर , मलाई लाग्छ , चीन लगायतकाे नेपाललाई आउने – दिने ठुलाे धनराशीकाे हतर्दिक सहयाेग भ्रष्ट , एकल जातीय एकाधिकार र एकात्मक शासनकाे तानाशाही राज्यसत्ता र शासकलाई टिकाउँने रणनीतिक साझेदारी नै हाे भनि हनमी आदिवनसी-जनजातिकाे बुझाई हाे । आजसम्म नेेपाललाई दिइआएकाे यस्ता सहयाेगहरूले नेपालका माथि उल्लेख जाति-समुदाय र वर्गलाई रत्तिभर याेगदान दिनसकेन । बरू यी जाति-समुदाय र वर्गकाे हित विरूध्द नै उपयाेग भएकाे प्रशस्त प्रमाण र उदाहरणहरू छन् । जसका कारण यी जाति-समुदाय र वर्गहरू गरीव , अशिक्षित , विकासबाट वंचित तथा राज्यकाे मुलधारबाट अलग राखियाे – हुनगयाे । यही अवस्थालाई चीन विराेधी शक्तिहरूले INGO-NGO , क्रिस्चियन मिसिनरी , अध्ययन-नुसन्धान र विकास कार्यक्रमकाे नाममा प्रयाेग भएकाे कुरा स्वयम चीनले पटक पटक नेपाललाई विराेध जनाउँदै आएकै हाे । भविष्यमा पनि विराेध जनाउँनु पर्ने अवस्था आउँन सक्ला ।
यसर्थ , जसरी नेपालकाे मधेसका नेपाली जनता र यसकाे सीमा पारी भारतीय जनता विचमा जाति , भाषा , धर्म , सँस्कृति र सामाजिक – आर्थिक सम्वन्ध उस्तै र गहिराे छ । उसैगरी नेपालकाे उत्तरी सीमाका हिमाली भाेट-वर्मेली जाति – समुदायकाे र पारी चीन-तिव्वत तर्फका सीमा क्षेत्रका जनता विच पनि समान सम्वन्ध र व्यवहार रहेकाे अवस्था छ । यही कारण नेेेेपाल तर्फका भाेट-वर्मेली जाति-समुदायकाे माथि भने झैं अवस्थाका कारण चीन-तिव्वत विराेधी शक्तिहरूलाई उपयाेग गर्न सहज भइदिएकाे छ । यी जनताकाे राजनैतिक, आर्थिक , सामाजिक , साँस्कृतिक सुदृढिकरण र राज्य तगा अन्तराष्ट्रिय मन्चमा सकृय उपस्थिति र भूमिका अपरिहार्य छ । यस्ता सचेत्तता र भूमिकाले मात्र नेपालकाे लाेकतन्त्र र राष्ट्रियता सुरक्षित र समृ्ध्द हुनेछ । र , यसाे हुन सकेमात्र चीन-तीव्वत पनि सुरक्षित हुनेछ र दुवै देशकाे साझा मुद्दा , विकासमा साझेदारी-सहकार्य र अन्नराष्ट्रिय मन्चमा समान मुद्दामा संगै उभिन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्नेछ । अर्काे अर्थ नलागेमा ।
काठमाडौ । नेपाल स्काउट र नेपाल प्रहरी बिच समुदाय प्रहरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्काउटको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ...
बैंकको ब्याजले गाउ नै ऋणमा डुब्दै
प्रचारप्रसारको अभावमा मालिका धुरी ओझेलमा